ယခုသင် Moto G5 Plus ကို Amazon တွင်မယုံနိုင်လောက်အောင်စျေးနှုန်းဖြင့် ၀ ယ်ယူနိုင်သည် Androidsis ပါ
ယခုသင် Moto G5 Plus ကို Amazon တွင်မယုံနိုင်လောက်အောင်စျေးဖြင့် ၀ ယ်နိုင်သည်
Francisco Ruiz | | Motorola က
ဤနှစ်၏အလယ်အလတ်တန်းစားအမြင့်ဆုံးစကားပြောဆိုမှုအရယခုနှစ်မျှော်မှန်းထားသည့်ဆိပ်ကမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်မှာသေချာသည် Moto G5Plus သည် ၂၇၉ ယူရိုဖြင့် Amazon တွင်တိုက်ရိုက်စာရင်းသွင်းနိုင်ပြီဖြစ်သည်. တတ်နိုင်စျေးနှုန်းထက်ပိုမို ကျနော်တို့ terminal ကို၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များကိုကြည့်ပါ။
Motorola အမှတ်တံဆိပ်မှပေးသောအာမခံချက်နှင့်အခြားအသွင်အပြင်များထဲမှတစ်ခုသည် terminal နှင့် terminal တစ်ခုပါရှိသည် ၅.၂″ IPS နည်းပညာဖြင့် FullHD မျက်နှာပြင်၊ RAM 5,2 GB; နှင့်သိုလှောင်မှု3Gb လိုအပ်လျှင် MicroSD slot တစ်ခုဖြစ်သော Qualcomm ၏ solvent ပရိုဆက်ဆာ၊ Qualcomm Snapdragon 625 Octa Core မှ 2.0 Ghz အမြင့်ဆုံးနာရီအမြန်နှုန်းဖြင့်တိုးချဲ့နိုင်သည်။
ဒီဆောင်းပါးရဲ့အစမှာငါပြောခဲ့တဲ့အရာတွေအပြင် ဒီ Moto G5 Plus အသစ်ဟာ Android 7.0 နဲ့ဂူဂဲလ်လက်ထောက်အသစ်ကိုအပြည့်အဝဖွင့်ထားတယ်။ ဤအချက်သည် Motorola သည် Google Assistant အသစ်ကိုမူလ Moto G5 Plus တွင်စတင်အကောင်အထည်ဖော်သည့်ပထမဆုံးအမှတ်တံဆိပ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
၎င်း၏အဓိကကင်မရာ၊ နောက်ဘက်ကင်မရာ၏အသွင်အပြင်နှင့် ပတ်သက်၍၊ Dual Pixel autofocus နည်းပညာဖြင့် 12MP ကင်မရာG4 Plus မှဒီ G5 Plus သို့သွားသောလမ်းတွင် megapixels လေးခုဆုံးရှုံးသွားသောကင်မရာ၊ အမှန်တရားမှာသက်သေပြနိုင်သည့်သူငယ်ချင်းများသည်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အရည်အသွေးပင်လျှင်ရရှိခဲ့ကြောင်းကျွန်ုပ်အားပြောခဲ့သည် နှင့်ပုံရိပ်တွေ၏အပြောင်းအလဲနဲ့မြန်နှုန်း။
ရှေ့ကင်မရာသည်5Mpx ရှိပြီးယခင်မော်ဒယ်နှင့်အတူတူဖြစ်သည်။ တူညီသောလမ်းအတွက်ဘက်ထရီ 3000 mAh မှာရှိနေမည် အမှန်တရားကကျွန်တော်တို့ကို ၆ နာရီအလုပ်လုပ်တဲ့ဖန်သားပြင်နဲ့နီးနီးကပ်ကပ်ဖြစ်သင့်တဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးဖို့လုံလောက်ပါတယ်။
ဤအရာအလုံးစုံနှင့်၎င်းသည်၎င်း၏ကိုယ်ထည်သည်သတ္တုဖြင့်ပြုလုပ်သောအရာနှင့်တူသည် လက်ဗွေဖတ်စက် သို့မဟုတ်သင့် tTurbo Power လျှင်မြန်စွာအားသွင်းနိုင်သောနည်းပညာအားသွင်းနိုင်သည့် ၁၅ မိနစ်သာအသုံးပြုနိုင်သည့်မြန်ဆန်သည့်အားသွင်းနည်းပညာသည် ၆ နာရီအသုံးပြုမှုကိုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးသည်။ ဤအမှုအလုံးစုံအတွက်ကျွန်ုပ်သည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၏ရောင်းအားအကောင်းဆုံးဆိပ်ကမ်းတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။
သငျသညျလိုလျှင် ဒီ Motorola Moto G5 Plus အသစ်ကို ၂၇၉ ယူရိုနဲ့ဝယ်ပါစျေးနှုန်းကငါထင်ထားတာထက်ပိုပြီး \_ t သင်ရုံဒီ link ကိုဖြတ်သန်းသွားရန်ရှိသည် မင်းကိုဘာသွားခေါ်မလဲ တရားဝင်အမေဇုံစတိုးတွင်သိမ်းထားပါ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Motorola က » ယခုသင် Moto G5 Plus ကို Amazon တွင်မယုံနိုင်လောက်အောင်စျေးဖြင့် ၀ ယ်နိုင်သည်
Samsung Galaxy S8 သည်0မိနစ်မှ 100% အထိမိနစ် ၂၀ အတွင်းအားသွင်းပါလိမ့်မယ်
Android အတွက် IMBd ဗားရှင်း 7.0 သည်အပြောင်းအလဲများနှင့်အတူရောက်လာလိမ့်မည်